» अब तपाईको फेसबुक नयाँ बन्नेछ, यी हुन् नयाँ फिचर
अब तपाईको फेसबुक नयाँ बन्नेछ, यी हुन् नयाँ फिचर
२१ भाद्र २०७७, आईतवार ०९:०८
चन्द्र घलान,मकवानपुर, २१ भदौ । शिर्षक पढेर तपाईलाई अचम्म लाग्यो होला । तर यो सही हो । सही यस अर्थमा कि अब उप्रान्त तपाईको फेसबुकको लुक्स नयाँ हुनेछ । तपाईको आईडी नै आफै नयाँ हुने त होईन तर तपाईको अहिलेकै फेसबुक आईडीमा भएको प्रोफाईलको लुक्स चाहिँ नयाँ हुने हो । फेसबुकले यही सेप्टेम्बर महिनादेखि फेसबुकको पहिलाको डिजाईनलाई बन्द गरेर नयाँ डिजाईन सुरु गर्दैछ । तपाईमध्ये धेरैको फेसबुक नयाँ डिजाईनमा आफै स्विच भईसकेको होला । कतिपयको भने बिस्तारै स्विच हुने अप्सन सुरु भएको छ । फेसबुकले जनाए अनुसार यो सेप्टेम्बर महिनापछि तपाईले फेसबुकको पुरानो क्लासिक भर्सन चलाउन सक्नुहुने छैन । केही प्रयोगकर्ताहरुले भने अझै पनि फेसबुकको क्लासिक भर्सनलाई स्विच गरेर चलाउनसक्ने सुविधा पाईरहेका छन् । तर यो पनि कहिलेसम्म हो भन्ने यकिन छैन । के छ त नयाँ फेसबुक डिजाईनमा ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । हेर्नुहोस् यो भिडियो सामग्री–
फेसबुकको नयाँ डिजाईनमा तपाईले पहिलाको भन्दा धेरै सेक्युरिटी पाउनुहुनेछ । जुन तपाई हाम्रो लागि निक्कै उपयोगी सावित हुनसक्छ । यसको नयाँ डिजनाईनमा तपाईले ईन्स्टाग्राममा जस्तै राम्रो क्वालिटीका तस्बिरहरु देख्नुहुनेछ । तपाईले होम पेजको माथि नै पेज, वाच, ग्रुप र गेमका अप्सनहरु पाउनुहुनेछ । फेसबुक पेजमा पनि तपाईले नयाँ डिजाईन देख्नुहुनेछ । पेजको ईन्साईट्स पनि अब तपाईले फेसबुक पेजकै सुरुमै देख्नुहुनेछ । पेजबाट ग्रुपमा शेयर गर्दा अब तपाईले फरक फरक ग्रुप ओपन गर्नुपर्ने छैन । तपाईले एक क्लिकमै सबै ग्रुपहरुमा पोष्ट शेयर गर्नसक्नुहुनेछ । ग्रुपको डिजाईन पनि तपाईले नयाँ पाउनुहुनेछ । सेटिङहरुमा पनि थप परिवर्तन र परिमार्जनहरु गरिएका छन् । तपाईले फेसबुकलाई डार्क मोडमा पनि चलाउन सक्नुहुनेछ भने केही समयका लागि क्लासिक फेसबुकमा स्विच गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ । तपाईले जुममा जस्तै मिटिङ गर्नका लागि क्रेट रुमको अप्सन पनि पोष्ट गर्ने ठाउँमा देख्नुहुनेछ ।
नयाँ फेसबुक डिजाईनका केही नराम्रा लाग्नसक्ने कुराहरु पनि छन् जसलाई फेसबुकले सच्चाउने प्रयास गर्दैछ । पहिलो हो अब तपाईले कम्प्युटरबाट पोष्ट गर्दा नयाँ फेसबुक डिजाईनमा पोष्टलाई सिधै स्टोरीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्न । पोष्ट गरिसकेपछि मात्र पछि फेरि स्टोरीमा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मोबाईल भर्सनमा भने यो सुविधा यथाबत नै छ । साथै होमपेजमा स्क्रोलिङ पेज राखिएको र फोटोलाई ईन्स्टाग्राममा जस्तै राम्रो क्वालिटी र ठूलो साईजमा देखाईने हुँदा तपाईलाई चलाउन असहज लाग्नसक्छ । तर यसका फाईदाहरु भने धेरै छन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई फेसबुकको नयाँ डिजाईन कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । फेसबुक सम्बन्धी अन्य कुनै जानकारी चाहिएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हामी तपाईको समस्यामा आधारित भिडियोहरु बनाउने प्रयास गर्नेछौँ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।